Isishwankathelo sevidiyo yokwakhiwa kweApple Park kunyaka ophelileyo | Ndisuka mac
Isishwankathelo sevidiyo sokwakhiwa kweApple Park kunyaka ophelileyo
Njengokuba iinyanga zihamba, kusele ixesha elincinci nelincinci lokumiselwa ngokusesikweni kwezixhobo ezitsha apho iApple iya kwenza wonke umsebenzi wayo. La maziko amatsha, abizwa ngokuba yiApple Park, aneminyaka emibini esakhiwa ulwakhiwo olunexabiso lilonke malunga ne-500 yezigidi zeedola, kubalwa isixa sexabiso somhlaba, umhlaba owawungowase HP. Uluvo lokuqala lokudala la maziko makhulu lwavela kuSteve Jobs, owathi ngokubambisana noJony Ive wayila esi siqwenga somhlaba siza kuthi kungekudala siqale ukufumana abasebenzi bokuqala, kwinkqubo ehambayo eya kuhlala malunga neenyanga ezi-6, ngokutsho koqikelelo lokuqala.
Kwividiyo esinokungena kuyo ngaphezulu, sinokufumana inkqubela phambili kulwakhiwo lwezixhobo. Kuyo yonke le vidiyo siyayibona indlela esebenza ngayo amaziko aphambili abizwa ngokuba yiSpaceship, itonela lokungena kwizibonelelo, isakhiwo Iya kugxila ikakhulu kwi-R & D yenkampaniIndawo yokuthambisa yabasebenzi, indawo yokupaka eya kuba nendawo yezithuthi ezingaphezu kwe-10.000, i-atrium kunye nentaba enkulu yomhlaba ekhutshwe kuyo yonke le minyaka mibini yokwakhiwa kwesi sixhobo sithuba.
Njengoko sikubonisile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, imisebenzi eApple Park iyaqhubeka ngokukhawuleza, emini nasebusuku, eminye imisebenzi ekufanele ukuba sele igqityiwe ngokwezicwangciso zokuqala zika-Apple, kodwa njengesiqhelo, imisebenzi iqokelele inani elikhulu yokulibaziseka ngenxa yeyantlukwano iikontraki ezifumene neAppleUmahluko ngamanye amaxesha uthathe ixesha elide kunesiqhelo ukusombulula. Ngethamsanqa, ngokungabikho kokuchukunyiswa kokugqibela, imisebenzi iza kugqitywa kungekudala kwaye iApple izakuvula iApple Park kuluntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Isishwankathelo sevidiyo sokwakhiwa kweApple Park kunyaka ophelileyo
Idatha yeLattice, ethengwe yiApple nge- $ 200 yezigidi
Imvelaphi yamaphephadonga eDynamic, ngoku asimahla okwexeshana